Moe Kai: ကြိုးစားမှုရဲ. ရလဒ်များ
တရုပ်နိုင်ငံ အားကစား သမားတွေရဲ. ကြိုးစားအားထုတ်မှုကတော. ကမ္ဗာမှာ တော်တော် လေးကို. အံ့ချီးပေးရတာပါ။ ဒါ ကျမရဲ. သိပ် အတွေ. အကြုံ မရင့်ကြပ်သေး တဲ. သူတစ်ယောက်ရဲ. အတွေ.အကြုံကနေပဲ ပြောတာပါ။ ဘားတန်းခုန် တဲ.နေရာမှာလဲ (Gymnastics) တရုပ်တွေက ကမ္ဗာ.ထိပ်တန်းပါ။ အဲဒီလို ဖြစ်လာအောင် ဘယ်လောက်တောင် သွေး ချွေး တွေ ရင်းနှီးမြှုတ်နှံရတယ် ဆိုတာ စာစောင်တွေ၊ တီဗွီးစီးရီး တွေမှာ လဲ အမြောက် အများ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ကမ္ဘာ တစ်ခုလုံးမှ သြချယူရတာပါ။ ဒီနေ. အိမ်ကိုပြန်လာတဲ. လမ်းမှာ အတွေးတခု ကပ်ပါလာပါတယ်။ ကိုယ်လိုချင်တဲ. ရည်မှန်းချက်ကို ရောက်ဖို. ကျမ ချွေး သွေး ခွန်အားတွေ ပိုမို စိုက်ထုပ်ရဦးမယ် ရယ်လို.ပါ ...